EMBASSY GETS ULTIMATUM - The Zimbabwean
EMBASSY GETS ULTIMATUM
PRETORIA: The Zimbabwean embassy in Pretoria today was issued with an ultimatum by the Revolutionary Youths of Zimbabwe to start seriously consider allowing Diaspora vote or risk extreme action.
“We are issuing at ultimatum to the Zimbabwean Embassy here up to 28 February to implement some democratic reforms or risk facing the unbearable action from youths.
“As much as we can not be seen condoning violence like what is happening in Kenya, as Zimbabweans we feel we will end up doing the same in the interest of our self defence,” said Mudekwa to a rapturous applause.
Addressing a crowd that showed support of the Morgan Tsvangirai led faction the patron of the youths, Reverand Mufaro Hove said ambassodors needed to acknowledge the extend of the crisis and not defend the tyrranical regime.
“The time for backing dictatorship is over we expect Zimbabweans all over including those serving in the embassies like ambassodor Simon Khaya Moyo in South Africa to start denouncing dictators.
“All Zimbabweans here in South have already started engaging in a liberational mood and the spirit is rising sooner than later we will deliver change,” said Mufaro Hove who is one of Mugabe’s fiercest opponents and critics.